रेडियो लिखुखिम्कु एफएम ९१.३ को टावर जडान सम्पन्न । – Sunuwar.org
रेडियो लिखु मुनाफा रहित सामुदयिक रेडियो हुनेछ । यो रेडियो पुर्णरुपमा कोइँचसमुदायको हितको लागि समर्पित, कोइँच समुदायबाट संचालित रेडियो हुनेछ । रेडियोको पहुँच पुग्ने जिल्ला (जस्तै रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, आदि) र गाविसहरु ((जस्तै भुजि प्रिती, कुभुँ काँस्थली, खिजी, फलाटे सिन्धुली आदि) मा वसोबास गदैै आएका कोइँचसुनुवार आदिवासीहरुको लागि मुख्यत र अन्य जातजातिका लागि रेडियो लिखु सुचना, शिक्षा, चेतना र मनोरञ्जनको भरपर्दो स्रोत र माध्यम हुने मात्र होईन, स्थानीय विकास निमार्ण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पयर्टन पर्वद्धनको साझेदार (Partner) हुनुका साथै हामी कोइँचसुनुवाहरुको भाषा, संस्किृति परम्परा बचाईराख्ने सक्रिया माध्यम हुनेछ । रामेछाप, दोलखा, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्वु, सिन्धुली र दोलखा र त्यस आसपासका जिल्ला र गाविसहरुमा रेडियो लिखुको पहुँच पुग्ने छ । त्यसकारण ति क्षेत्र र वरपर बसोबास गर्नेहरु यो रेडियोको नियमित तथा आंशिक श्रोता हुनेछन् ।
रेडियो लिखु सुनुवार कोँइचहरुको किपटमा यस्को स्टेशन रहनेगरी सम्पुर्ण कोँइच सुनुवारहरुलाई लक्षित गरी देश र विदेशका विभिन्न कुनामा रहेका सुनुवारहरुलाई सञ्चारको माध्यमबाट सञ्चार गराउने, सुनुवार कोँइँचहरुलाई सुसुचित र सशक्तिकरण गराउदै राष्टिय मुलप्रवाहमा सक्षम वनाउने अभिप्रायले सुनुवार सेवा समाज अन्र्तगत नै सञ्चालन हुने सामुदायिक रेडियो हो । सुनुवार सेवा समाजको विद्यानमा रेडियो सञ्चालन गर्ने उदेश्य नभएको कारण लाईसेन्स प्राप्त गर्न गार्न गा¥हो भएको कारण सुनुवार सेवा समाज अन्र्तगत नै रहनेगरी चुप्लु फाउन्डेसन नामक गैरनाफामुखी संस्था दर्ता गरी नाममा लाईसेन्स प्रप्त गरी रेडियोको टावर जडान गरिसकेको र हाल रेडियोको लागि आवश्यक ट्रान्समिटर, कम्प्युटर, रेकर्डर जस्ता आवश्यक उपकरणहरु खरिद गर्ने र रेडियोको भवन निर्माण गर्ने काम गरिरहेकोले सवै कोँइँच सुनुवार समुदायहरुबाट आफ्नो गक्ष अनुसार आवश्यक रकम प्रदान गरी सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखिएको छ ।
रेडियो लिखुको लागि आर्थिक सहयोग गर्नेका लागि रेडियोले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा ।
संस्थापक वरिष्ठ संरक्षक सल्लाहकार जस्ले रु २,००,००० (दुईलाख) न्युनतम सहयोग गर्नेछन । सहयोग गरेवापत पाउने सेवा सुविधा :
> प्रत्येक संस्थापक वरिष्ठ संरक्षक सल्लाहकारहरुको फोटो र सहयोग गरेको रकम सहित सवैले देख्ने गरि रेडियोको भवन अगाडी शिलालेख वा ताम्रा पत्रमा राखिनेछ ।
> रेडियोले आयोजना गनर््े प्रत्येक सार्वजानिक गतिविधी तथा कार्यक्रमहरुमा मञ्च दिने, रेडियोलाई योगदान गरेवापत ताम्रपत्र सहित सम्मान गरिनेछ ।
> प्रत्येक संस्थापक वरिष्ठ संरक्षक सल्लाहकारहरुको रेडियोमा, वेवसाईट र रेडियोको प्रकासनहरुमा जिवनी प्रकासन तथा प्रशारण गरिनेछ ।
> वडादशै, लोसार, चण्डी, नयाँ वर्ष लगायतका महत्वपुर्ण चाडपर्वको नियमित रुपमा वार्षिक १५० पटक सम्म आजिवन रुपमा प्रशासन गरिनेछ । जसको रेडियो विज्ञापन दर एक पटकको रु ३०० को दरले हिसाव गर्दा वार्षिक ४५,००० योगदान गरेको रकम उठ्नेछ ।
> भने, व्यवसायीक विज्ञापन ५०० पटक सम्म निशुल्क प्रशारण गरिनेछ । रेडियोको विज्ञापन एक पटकको रु ३०० को दरले पनि रु. १,५०,००० हुनेछ ।
> सहयोग गरेको रकम, जेथा, उपकरण या अन्य सरसहयोग रेडियोको वेवसाईटमा फोटोसहित राखिने ( www.radiolikhu.com)
संस्थापक संरक्षक सल्लाहकार जस्ले रु १,००,००० (एकलाख) न्युनतम सहयोग सहयोग गर्नेछन । सहयोग गरेवापत पाउने सेवा सुविधा :
> प्रत्येक संस्थापक संरक्षक सल्लाहकारहरुको फोटो र सहयोग गरेको रकम सहित सवैले देख्ने गरि रेडियोको भवन अगाडी शिलालेख वा ताम्रा पत्रमा राखिनेछ ।
> प्रत्येक संस्थापक संंरक्षक सल्लाहकारहरुको रेडियोमा, वेवसाईट र रेडियोको प्रकासनहरुमा जिवनी प्रकासन तथा प्रशारण गरिनेछ ।
> वडादशै, लोसार, चण्डी, नयाँ वर्ष लगायतका महत्वपुर्ण चाडपर्वको नियमित रुपमा वार्षिक १०० पटक सम्म आजिवन रुपमा प्रशासन गरिनेछ । जसको रेडियो विज्ञापन दर एक पटकको रु ३०० को दरले हिसाव गर्दा वार्षिक ३०,००० योगदान गरेको रकम उठ्नेछ ।
> भने, व्यवसायीक विज्ञापन ४०० पटक सम्म निशुल्क प्रशारण गरिनेछ । रेडियोको विज्ञापन एक पटकको रु ३०० को दरले पनि रु. १,२०,००० हुनेछ ।
संस्थापक संरक्षक रु. ५०,००० (पचासहजार) न्युनतम सहयोग गर्नेछन । सहयोग गरेवापत पाउने सेवा सुविधा :
> प्रत्येक संस्थापक संरक्षकहरुको फोटो र सहयोग गरेको रकम सहित सवैले देख्ने गरि रेडियोको भवन अगाडी शिलालेख वा ताम्रा पत्रमा राखिनेछ ।
> प्रत्येक संस्थापक संरक्षकहरुको रेडियोमा, वेवसाईट र रेडियोको प्रकासनहरुमा जिवनी प्रकासन तथा प्रशारण गरिनेछ ।
> वडादशै, लोसार, चण्डी, नयाँ वर्ष लगायतका महत्वपुर्ण चाडपर्वको नियमित रुपमा वार्षिक ५० पटक सम्म आजिवन रुपमा प्रशासन गरिनेछ । जसको रेडियो विज्ञापन दर एक पटकको रु ३०० को दरले हिसाव गर्दा वार्षिक १५,००० योगदान गरेको रकम उठ्नेछ ।
> भने, व्यवसायीक विज्ञापन २०० पटक सम्म निशुल्क प्रशारण गरिनेछ । रेडियोको विज्ञापन एक पटकको रु ३०० को दरले पनि रु. ६०,००० हुनेछ ।
> रेडियो लिखुको धधध।चबमष्यष्पिजग।अयm मा सहयोग गरेको रकम, या अन्य जायजेथा अनलाईन राखिनेछ ।
संस्थापक आजिवन सदस्य रु २५,००० (पच्चीसहजार) वा न्युनतम
> प्रत्येक सदस्यहरुको फोटो र सहयोग गरेको रकम सहित सवैले देख्ने गरि रेडियोको भवन अगाडी शिलालेख वा ताम्रा पत्रमा राखिनेछ ।
> प्रत्येक सदस्यहरुको रेडियोमा, वेवसाईट र रेडियोको प्रकासनहरुमा सहयोग गरेको रकम र सहयोग रकम र जिवनी प्रकासन तथा प्रशारण गरिनेछ ।
> वडादशै, लोसार, चण्डी, नयाँ वर्ष लगायतका महत्वपुर्ण चाडपर्वको नियमित रुपमा वार्षिक १० पटक सम्म वार्षिक विज्ञापन आजिवन रुपमा प्रशासन गरिनेछ । जसको रेडियो विज्ञापन दर एक पटकको रु ३०० को दरले हिसाव गर्दा वार्षिक ३,००० रकम उठ्नेछ ।
> भने, व्यवसायीक विज्ञापन २५ पटक सम्म निशुल्क प्रशारण गरिनेछ । रेडियोको विज्ञापन एक पटकको रु ३०० को दरले पनि रु. ७,५०० हुनेछ ।
> रेडियो लिखुको www.radiolikhu.com मा सहयोग गरेको रकम, या अन्य जायजेथा अनलाईन राखिनेछ ।
आर्थिक सहयोग पारदर्शिताको लागि
१) रेडियो लिखुको वेवसाईट : www.radiolikhu.com मा सहयोग गर्नेको नाम, रकम, या अन्य जायजेथा को साथै खर्च भएको विवरण अनलाईनमा सार्वजानिकिकरण गरि राखिने छ ।
सो विवरण इन्टरनेट उपलब्ध भएको जुनसुकै ठाउँबाट सवैले हेर्न सकिनेछन ।
२) रेडियो प्रशारण भएपश्चात कस्ले कति, के के सहयोग गरयो त्यो विवरण प्रशारण गरिनेछ ।
३) रकम निकासाका लागि सहयोगीहरु मध्येवाट एकजना र रेडियोको तर्फबाट एकजनाको सही चल्नेगरी वैकमा खाता खोलिनेछ । रेडियो स्थापना भएको निश्चित समयमा प्राप्त सहयोग र खर्च वा प्रगति विवरण प्रत्येक सहयोगीलाई विभिन्न माध्यममार्फत प्राप्त गराईनेछ ।
« हर्षोल्लास सहित समापन भयो नेपाल खाल्डोमा शाँदार पिदार
राज्य पुनःसंरचनामा कोइँचको पूख्र्यौली थाँतथलो »